I-Pot Roast Ephelele (Ngakho-ke Ithenda Nokunambitheka!) - Ungadliwa
inkukhu oluhlaza pepper pepper anyanisi gazinga
ukhozi lomkhiqizo wokhozi ibhotela lamantongomane
amakhekhe e-peanut butter fudge ngobisi olujiyile
I-Pot Roast ephelele
Wonke umpheki wasekhaya udinga ukuba neresiphi yakudala yokosa okuphekwe nge-gravy, izaqathe namazambane!
Le recipe elula ilungele abaqalayo futhi iletha imiphumela emangalisayo ngaso sonke isikhathi! Ama-rock roast ukusikeka okungabizi kwenkomo okupheka kuhhavini ezingeni lokushisa okuphansi amahora ambalwa. Faka inqwaba yemifino kanye namakhambi athile anomsoco wesidlo esihle.
Fana no IMississippi imbiza eyosiwe elenziwa ngesipheki esisheshayo, le mbiza eyosiwe yenziwa kuhhavini, kepha ibhodwe elosiwe nalo lingaba njalo eyenziwe ebhodweni elisheshayo uma uthole eyodwa!
I-Pot roast iyintandokazi esheshayo kunoma yimuphi umkhaya! Akukhona nje kuphela ukuthi kulula ukuhlanganisa ndawonye, ​​kodwa kwenza izimbiza ezinkulu zokugcoba ama-sandwich njengokudla okusele, noma okugoqwe noma kwepita. Khonza le recipe enhle futhi ejabulisayo ngaphezulu amazambane abondiwe futhi ngohlangothi lwe okuzenzela isinkwa sikagalikhi .
Yini i-Pot Roast?
Lokhu yi-classic yokupheka futhi ngesizathu esihle!
Ibhodwe elosiwe ukosa kwenyama yenkomo okuvame ukusikwa okunzima. Ukupheka ngokushisa okuphansi isikhathi eside kudiliza izicubu ezinzima ezixhuma okuholela enkomeni yenkomo ethambile enommbila onambithekayo.
Izinketho ezinhle zokuphekelwa kwebhodwe zifaka i-chuck roast (ukukhetha engikuthandayo kakhulu), ukosa okuyindilinga noma i-rump roast
Inyama ibilisiwe, izungezwe izaqathe, u-anyanisi, nenhlanganisela emnandi yamakhambi nezinongo bese kubhakwa kuze kube yilapho incibilika emlonyeni wakho.
Ungayipheka kanjani i-Pot Roast
SEAR Faka u-oyela epanini bese usesha i-chuck eyosiwe emafutheni (i-bacon grease ingcono uma unayo!) Kuze kube nsundu nxazonke.
ENGEZA UBUZALWANE Beka u-anyanisi uzungeze ukosa bese ufaka iwayini, umhluzi, irosemary ne-thyme. Letha isimeme bese ubhaka amahora amabili kuhhavini.
ENGEZA IMIFIHLO Faka amazambane kanye nezaqathe bese ubhake kuze kube yilapho amazambane esethenda, cishe amanye amahora amabili. Susa iqabunga le-bay.
KHONZA Sika ukosa kube izingcezu ezincane noma usike ngezimfoloko ezimbili bese ukhonza.
Ukupheka Isikhathi Eside Kangakanani
Le recipe isuselwa ku-roast ye-chuck ejwayelekile, cishe ama-4lbs (nika noma thatha). I-pot roast iphekwe kahle ngezinga eliphansi lokushisa isikhathi eside ukudiliza noma yiziphi izicubu ezinzima.
Pheka i-3lb eyosiwe amahora angu-3-3.5
Pheka u-4lb wokosa ama-3.5-4 amahora
Pheka u-5lb wokosa ama-4.5-5 amahora
Izikhathi zokupheka zingahluka ngokuya ngohlobo lokosa. Hlola ukosa ngemfoloko, uma kunzima, ukosa mhlawumbe idinga isikhathi ESENGEZIWE ukupheka. Yimboze emuva uphinde uyiyeke iqhubeke nokupheka.
Uyenza Kanjani Imbiza Ye-Roast Gravy
Le gravy ilula kakhulu futhi imnandi nje, ngezinyathelo ezi-3 kuphela!
Hlanganisa izipuni ezimbili zesitashi sommbila emanzini abandayo kuze kube bushelelezi (lokhu kubizwa nge- slurry ).
Susa inyama yenkomo nemifino umhluzi bese uletha esimweni. Kufanele ube nezinkomishi ezimbili, engeza umhluzi wenkomo uma kudingeka.
Hlanganisa i-slurry emhluzweni oqhumayo kuze kube yilapho uqina.
Amathiphu we-Roast Ephelele
Khetha ukosa onobumbano obuningi kuwo -okuthwala ukunambitheka futhi okusiza ekwenzeni i-gravy ithele umlomo ngokuphelele!
Amazambane wezingane ayinto enhle kakhulu. Azidingi ukuxotshwa futhi zibambe ukuma kwazo kahle (amazambane e-russet ajwayele ukuwa, yize esanambitha kahle)
Sika izaqathe nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kancane ukuze zingaphuzi ngokweqile
Amakhambi amasha angcono kakhulu kepha angomiswa angasetshenziswa, vele uwasebenzise kancane ngoba amakhambi omisiwe anokunambitheka okugxile kakhulu kunokusha.
Faka izipuni ezi-2 zikamatamatisi unamathele kumhluzi uma ufisa.
Ukudla Kwenkomo Okuthandayo
Inkabi Stew Recipe
Amathiphu enkomo & Gravy
I-Beef Stroganoff elula
I-Slow Cooker Barbacoa Beef
Ngabe wenze le Chuck Roast? Qiniseka ukuthi ushiya amazwana nesilinganiso ngezansi!
Isikhathi sokulungiselela25 imizuzu Isikhathi Sokupheka4 amahora 10 imizuzu Isikhathi Esiphelele4 amahora 35 imizuzu Izinkonzo8 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Le Pot Roast inongwe kahle futhi inikwa imifino yethenda! Phrinta Phina
▢1 isipuni Amafutha e-Olive
▢3-4 amakhilogremu chuck ukosa noma i-rump roast
▢1 enkulu u-anyanini oqoshiwe, noma u-anyanisi omncane omncane
▢4 izaqathe uthathe izingcezu ezi-2 '
▢ezimbili uhlaka isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi uthathe izingcezu eziyi-1 ½
▢1 iphawundi amazambane wezingane
▢1 inkomishi iwayini elibomvu
▢ezimbili izinkomishi yenkomo umhluzi noma njengoba kudingeka
▢½ isipuni rosemary
▢½ isipuni i-thyme
▢1 Ihlamvu le-bay
Hlangisa i-ovini iye ku-300 ° F.
Isizini sosiwe ngosawoti kanye nopelepele.
Kuhhavini enkulu yase-Dutch, shisisa isipuni samafutha omnqumo ngaphezu kokushisa okuphakathi naphakathi. Bheka ukosa ohlangothini ngalunye kuze kube nsundu, cishe imizuzu engama-4 ohlangothini ngalunye engeza uwoyela omningi uma kudingeka.
Hlela u-anyanisi uzungeze ukosa. Hlanganisa iwayini, umhluzi, i-rosemary, i-garlic ne-thyme. Thela phezu kokosa. Faka iqabunga le-bay.
Letha nje ukumisa esitofini phezu kokushisa okuphakathi naphakathi. Lapho umhluzi usubila, vala bese ubeka kuhhavini ubhake amahora amabili.
Faka amazambane, izaqathe, nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, bese ubhaka amahora ama-2 angeziwe (nge-4lb roast) noma kuze kube yilapho ukosa namazambane kuyithenda lemfoloko.
Lahla iqabunga le-bay. Ngomusa udonse inyama yenkomo ibe yizicucu ezinkulu ngemfoloko noma ucezu ube izingcezu eziwugqinsi. Khonza ngamajusi (noma wenze i-gravy ngezansi uma uthanda).
Hlanganisa izipuni ezimbili zommbila namanzi wezipuni ezi-2 kuze kube bushelelezi.
Susa inyama yenkomo nemifino ebhodweni bese ubeka ipuleti ukuze uphumule. Faka umhluzi owengeziwe uma kudingeka.
Letha umhluzi emathunjini bese uphonsa inhlanganisela ye-cornstarch kancane kancane kuze kube yilapho uqina.
Isizini ngosawoti & pepper ukunambitha.
Amakholori:579,Amakhabhohayidrethi:22g,Amaprotheni:47g,Amafutha:31g,Amafutha agcwalisiwe:12g,Cholesterol:156mg,I-Sodium:377mg,Potassium:1491mg,Umucu:3g,Ushukela:4g,Uvithamini A:6883IU,Uvithamini C:amashumi amabilimg,I-calcium:79mg,Insimbi:6mg
Igama elingukhiyeiresiphi yebhodwe engcono kakhulu, i-chuck eyosiwe, iresiphi ye-chuck eyosiwe, ungayenza kanjani imbiza eyosiwe, ibhodwe eyosiwe, iresiphi yebhosi InkamboInkomo, Idina, Ukungenela, Inkambo Eyinhloko KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .